Shiinaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dib-u-warshadeynta Mashiinka Nadiifiyaha Mashiinka Nadiifiyaha Dhexe iyo alaab-qeybiyeyaasha | YUNFENG
Mashiinka Nadiifiyaha Mashiinka Dib-u-warshadaynta Nadiifiyaha Nadiifiyaha Mashiinka Dhex-Dheer
Nadiifiyaha Dhex-dhexaadiyaha Dhexe waa mid ka mid ah qalabka casriga ah ee lagu nadiifiyo saxarada, gaar ahaan saxarka waraaqda lagu nadiifiyo oo wanaagsan, waraaqda qashinka dib-u-warshadaynta lama huraanka ah. Qalabka adeegsanaya "xawaaraha snail" ee saxarka, si buuxda u xallinaya nadiifinta nadiifiye nadiifiyaha ah ee qulqulka qulqulka qulqulka qulqulka, slag wuxuu hubiyaa saameyn wanaagsan, laakiin sidoo kale wuxuu yareynayaa cadaadiska luminta. Nadiifiyaha Dhex-dhexaadinta Dhexe iyadoo la adeegsanayo ballaaran, labadaba qashin-qubka sare ee nadiifinta nadiifinta ka hor machi ...
Nadiifiyaha Dhex-dhexaadiyaha Dhexe waa mid ka mid ah qalabka casriga ah ee lagu nadiifiyo saxarada, gaar ahaan saxarka waraaqda lagu nadiifiyo oo wanaagsan, waraaqda qashinka dib-u-warshadaynta lama huraanka ah. Qalabka isticmaalaya "xawaaraha snail" ee saxarka, wuxuu si buuxda u xalliyaa nadiifiye nadiifiye nadiifiyaha ah ee qulqulka diyaaradda qulqulaya, carqaladdu waxay xaqiijineysaa saameyn wanaagsan, laakiin sidoo kale waxay yareysaa cadaadiska luminta.
Nadiifiyaha Dhexdhexaadka Dhexdhexaadka iyadoo la adeegsanayo ballaaran, labadaba nadiifinta saxarka joogtada ah ee nadiifinta ka hor inta aan mishiinka sidoo kale loo isticmaali karin xulashada nadiifinta saxarka hooseeya.
Mashiinka qashirka waxaa badanaa loo isticmaalaa ka saarida wasaqda culus sida birta, musbaarka buuga, dambaska, ciida iyo dhalada jaban iwm. Waxay yareyn kartaa xirashada qalabka soo socda waxayna wanaajineysaa tayada fiberka. Waa aaladda muhiimka ah ee dib-u-warshadaynta waraaqaha qashinka, isticmaalkeeda faybar iyo saamiga nijaasta, oo ka dhigaysa wasakhda culus ee ka soo go'da saxarka, lagu gaarayo ujeeddada nadiifinta saxarka.
lagu dalbaday in laga saaro dhammaan noocyada wasakhda culus ee ku jira saxarka waraaqda, sida jaranjarada, dhagaxa, muraayadaha, iwm.
Qolka gelitaanka saxarka ee mugga leh
Awood adag oo eddy ah
Subarea aag cadaadiskiisu hooseeyo oo muuqda
Tani waxay ka dhigaysaa aqbalaada iyo nijaasta si buuxda u kala fog.
Xidho koorta dhoobada iska caabbinta, nolosha muddada dheer.
Koorta dheer ee sida gaarka ah loo qaabeeyey waxay leedahay xagal yar oo taper ah iyo hufnaan nadiifin.
Qalabka leh kontoroolka xakamaynta PLC, ku habboon oo sahlan in la xakameeyo, wasakhda ku filan ee dheecaanka.
Dheecaan iswada oo goos goos ah
Dheecaanka qulqulka joogtada ah ee socda.
Nadiifiye HT taxane sare leh ayaa ka takhalusi kara wasakhda culus ee ka weyn 3mm dhexroor ee waraaqda dib loo warshadeeyay.
Maaddaama ay tahay qalab baaris aan dhab ahayn, badanaa waa qalab hoos u dhaca oo ka mid ah hydrapulper. Waxaa sidoo kale lagu rakibi karaa qalab muhiim ah
si loo hubiyo hawlgalka qalabka wax soo saarka hoos-socodka ah.
Hore: 350 Nadiifiye saxarka loogu talagalay Qalabka Dib-u-warshadaynta Qashinka
Xiga: Ahama 304 cufnaanta sare warqad mashiinka nadiifiyaha cufnaanta sare mashiinka warqad qaadashada qiimaha mashiinka